Midowga Yurub ayaa soo jeedinayaa in dib loo dhigo xuquuqda magangalyada dadka ka imaanaya Belarus. | Warbaahinta Ayaamaha
Ayaamaha-Belarus- Madaxa fulinta ee Midowga Yurub ayaa soo jeediyay in dalalka xubnaha ka ah ee xuduudka la leh Belarus loo ogolaado in ay maareeyaan magangalyo doonka iyadoo la raacayo habraacyada wax laga beddelay ee khatarta ku ah inay wiiqaan ilaalinta qaxootiga.
EC waxay soo jeedisay in la ogolaado ilaa afar todobaad – halkii ay ka ahaan lahayd ugu badnaan 10 maalmood oo hadda lagu balamay sharciyada EU – in la diiwaan geliyo codsiyada magangalyada ee dadka ka soo gudbay Belarus.
Waxa kale oo ay u ogolaanaysaa Poland, Lithuania iyo Latvia in ay magangalyo-doonayaasha diiwaangashan ku hayaan ilaa 16 toddobaad dhinaca xudduudaha ay la leeyihiin Belarus halka mas’uuliyiintu ay falanqeeyaan codsiyada dadka ee ilaalinta – laakiin tani waxay u diidi doontaa xuquuqda taagan ee lagu hayo si ka habboon. xarumaha dalka gudihiisa.
Tallaabooyinku waxay u baahan doonaan ansixinta Golaha Yurub – oo ah hay’ad ka kooban madaxda dawladaha dhammaan 27ka waddan ee xubnaha ka ah Midowga Yurub – ka dib markii ay la tashadaan baarlamaanka Yurub.